Shina dia nanakona boaty fitahirizana trano fonosana vita amin'ny boaty fanamboarana boaty mpanamboatra sy mpamatsy | Huaguang
sarony avy amin'ny boaty fitahirizana trano mitazona baoritra boaty taratasy
mitafo fanitso ba kiraro boaty fitehirizana
Size: 35 * 35 * 35cm
Takeaway: izany hoe misafidy fitaovana fonosana sahaza, famolavolana fonosana amin'ny alàlan'ny haitao marani-tsaina, ho an'ny famonosana entana amin'ny maodelin'ny firafitry ny kaontenera sy ny hatsaran-tarehy amin'ny famolavolana haingon-trano fonosana, hatramin'ny loko fonosana, endrika, fitaovana sns. fiteny, manome ny fananana toetra manokana miavaka, fa koa ny fametrahana sary maso tonga lafatra ho an'ilay zavatra, satria ny fepetra takiana ho an'ny mpanjifa dia mitsara ny kalitaon'ny varimbazaha avy amin'ny akofa, mizara ny famolavolana fonosana amin'ity taratasy ity, teboka dimy ary singa telo lehibe , atiny ho fanovozan-kevitra ho an'ireo naman'i Huaguang .Miezaka ihany koa izahay handrava ity boaty fitahirizana ba kiraro mitazona ity amin'ity lahatsoratra ity.
Ny famolavolana fonosana dia tetikasa voarindra izay mitaky fomba sy fomba siantifika sy milamina hahatratrarana fonosana mahomby sy hampitomboana ny tombom-barotra rehefa apetraka eny an-tsena ny vokatra. Fantaro fotsiny ny fametrahana ny paikadin'ny fonosana vokatra, amin'ny alàlan'ny fandikana mahomby sy fampisehoana ny famolavolana fonosana vokatra ary ny fampifangaroana tanteraka ny foto-kevitra momba ny varotra orinasa, hahafahana mamolavola. Ity boatin-kiraro mitazona ba kiraro ity dia tsy dingana tsotra manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny famokarana ary farany natolotra ny mpanjifa.
1. Hevi-dehibe dimy amin'ny famolavolana fonosana
Ny asan'ny fonosana dia ny miaro ny entana, mampita vaovao momba ny entana, mora ampiasaina, mora entina, mampiroborobo ny varotra. Amin'ny maha lohahevitra feno azy, ny fonosana dia manana toetra roa amin'ny fampifangaroana ny entam-barotra sy ny zavakanto. Ny famolavolana fonosana mahomby dia tsy maintsy manana ireto hevi-dehibe dimy manaraka ireto:
(2) Azo vakiana
(3) Lamin'ny fisehoana
(4) Fiheverana momba ny mari-barotra
(5) Famaritana ny fiasa sy ny endri-javatra
Heveriko fa ny boaty mitazona ba kiraro mitafo dia manome ny olon-drehetra ho tena tsara, maitso maitso ny tonony faobe, akanjo ao an-trano ny fitehirizana fatratra, mamy sy faly.
2. Ireo singa fisehoan'ny singa mpiorina
Ny fisehoan'ny bika dia ny fisehon'ny fisehoana fonosana entam-barotra, ao anatin'izany ny haben'ny habeny, ny habeny ary ny endriny. Misy endrika telo hitantsika amin'ny fiainantsika isan'andro, dia ny endrika voajanahary, ny endrika artifisialy ary ny endrika tsy nahy. Fa rehefa mandinika ny endriky ny vokatra iray isika dia tsy maintsy mahita endrika izay azo ampiharina amin'ny fananana rehetra, izany hoe, hamoahana ny mahazatra mahazatra, ary hiantsoana azy io ho endrika misintona.
Fantatsika fa ny lalàm-panorenan'ny endrika dia singa iray amin'ny endrika, na ity ny singa amin'ny endrika, ireo endrika miovaova izay noforonina tamin'ny fomba sy fitsipika sasany. Ny endrika dia misy teboka, tsipika, fiaramanidina ary vatana. Ny endrika fonosana dia ahitana varingarina, cuboid, cone, endrika isan-karazany ary fitambaran'ny endrika mifandraika, ary koa endrika isan-karazany noforonin'ny fanapahana samihafa. Ny zava-baovao amin'ny endrika fonosana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitarihan'ny mpanjifa ny fahitan'izy ireo, ary ny endrika tsy manam-paharoa endrika dia ahafahan'ny mpanjifa manana fahatsapana lalina amin'ny fanontana. Ny mpamorona fonosana dia tsy maintsy mahafantatra ny toetran'ny singa endrika sy ny endrik'izy ireo, ary raisina ho fitaovana hanehoana ny hatsaran'ny endrika.
Rehefa mandinika ireo singa miseho amin'ny famolavolana fonosana isika dia tsy maintsy takatsika ihany koa izany avy amin'ny Angle of lalàn'ny hatsaran-tarehy ofisialy. Araka ny fitsipiky ny hatsaran-tarehy ofisialin'ny famolavolana fonosana miaraka amin'ny toetoetran'ny asan'ny vokatra manokana, ireo singa isan-karazany dia hitambatra ara-organika sy voajanahary mba hahazoana sary endrika mirindra mirindra.
Ity boaty mitazona ba kiraro ity dia miendrika sarom-bilany sy fotony. Ny fampidirana dia vita amin'ny harafesina, izay mizara ny boaty lehibe ho efamira kely mety amin'ny ba kiraro. Ity karazana boaty ity dia tian'ny mpanjifa kokoa.
3. Ireo singa fitambarana
Composition dia sary feno an'ny mari-pamantarana, sary, lahatsoratra ary fitambarana eo amin'ny sehatry ny fonosana entam-barotra. Ity fitambaran'ny lafiny efatra ity dia manome ny vokatry ny fonosana amin'ny ankapobeny. Ny famolavolana ny famolavolana ny singa ny marika, ny sary, ny soratra ary ny loko fampiasana ny marina, sahaza, tsara tarehy, dia azo antsoina hoe asa famolavolana tena tsara.
Ny mari-pamantarana dia marika, ny orinasa, ny andrim-panjakana, ny entam-barotra ary ny sary famantarana ny fananganana tsirairay. Ny marika dia misy resaka politika, toekarena, rafi-dalàna, zavakanto ary sehatra hafa. Ny toetra mampiavaka ny mari-pamantarana dia manapa-kevitra amin'ny asany, ny endriny. Te-haneho ny atiny manan-karena amin'ny endrika tsotra sy ankapobeny kokoa amin'ny toerana somary kely izy, ary miaraka amin'izay dia mitaky ny fahitan'ny mpandinika ny dikany anatiny ao anatin'ny fotoana fohy. Amin'ny ankapobeny, ny mari-pamantarana dia azo zaraina amin'ny endrika telo: marika famantarana ny soratra, marika famantarana sary sy ny fitambaran'ny lahatsoratra sy sary. Ny famolavolana mari-barotra mahomby dia tokony ho vokatry ny fitambaran'ny fomba famoronana. Ny fahaiza-mamorona dia ny syntheta, ny famakafakana, ny fampidirana ary ny fanatobiana hevitra iray mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny famolavolana. Amin'ny alàlan'ny fisainana filozofia, ny foto-kevitry ny famolavolana dia novaina avy amin'ny fanehoana abstract ho famolavolana sary mivaingana.
Ny sarin'ny haingon-trano fonosana dia manondro ny sarin'ny vokatra sy sary haingo fanampiny fanampiny. Ny sary, amin'ny maha fiteny ny endrika azy, dia ny fampisehoana ireo singa anatiny sy ivelany amin'ny sary ary mampita ny vaovao amin'ny mpanjifa amin'ny endrika sary hita maso. Ho an'ity tanjona ity, ny fananganana marina ny endrika sary dia tena manakiana. Ny fizotry ny fametrahana dia ny fizotran'ny fahazarana ny atin'ny vokatra rehetra, ao anatin'izany ny toetoetran'ny entana, mari-pamantarana, ny dikan'ny anaran'ny vokatra ary ny satan'ny vokatra mitovy amin'izany ary ny anton-javatra maro hafa dia tokony ho fantatra sy dinihina.
Ny sary dia azo zaraina ho sary ara-batana sy sary haingon-trano eo amin'ny endrika maneho azy.
Ny fampiasana teknikan'ny sary hosodoko, ny fakana sary sns. Ny sary hoso-doko dia endrika lehibe amin'ny famolavolana haingon-trano fonosana, araka ny hevitra ankapobeny amin'ny fonosana ilaina amin'ny fanaovana sary, ho an'ny entana. Raha ampitahaina amin'ny saripika sary dia manana ny mampiavaka ny fahalalahana hisafidy sy hanatsara ary hamorona ankapobeny. Ny fanaovana hosodoko dia fitaovan'ny dokambarotra, fanatsarana ary fivarotana entana. Na izany aza, ny endrika ara-barotra amin'ny fonosana entam-barotra dia mamaritra fa ny endrika dia tokony hanasongadina ny tena sarin'ny entana ary hanome ny mpanjifa sary intuitive. Noho izany, ny sary no fomba tsara indrindra hanehoana ny sary hita maso sy hita maso amin'ny famolavolana fonosana sy haingo.
Mizara ho teknikan'ny fanehoana fanehoana hevitra sy tsy misy dikany izany. Ny tarehimarika, ny endrika, ny biby na ny zavamaniry dia azo ampiasaina ho sary an'ohatra maneho ny atiny sy ny toetr'ilay fonosana. Teknolojia Abstract dia ampiasaina amin'ny freachand brushwork bebe kokoa, ampiasao teboka abstract, tsipika, endrika endrika geometry tarehy, loko miloko na vokany firafitra mba hamoronana sary, fohy, sahisahy, manana fahatsapana endrika, koa ho teknika fitenenana lehibe amin'ny haingon-trano fonosana. Amin'ny ankapobeny, ny endrika mivaingana sy ny fanehoana abstract dia tsy mitoka-monina amin'ny famolavolana sy ny famolavolana haingon-trano, fa mifangaro.
Ny fampiraisana ny atiny sy ny endrika dia ny fitsipika ankapobeny amin'ny famolavolana sary, amin'ny fizotry ny famolavolana, mifanaraka amin'ny filan'ny atiny misy sary, mifidy ireo teknika fampisehoana sary mifanaraka amin'izany, hahatratrarana ny firaisan'ny endrika sy ny atiny amin'ny famolavolana sary, mamorona taratry ny fanahin'ny taona, ny fomban'ny foko azo ampiharina, ny toekarena, ny endrika famolavolana haingon-trano tsara tarehy no tena takian'ny mpamorona fonosana.
Ity boaty fitahirizana bazy mitafo fonenana ity dia an'ny fitahirizana ankohonana. Noho izany, ny endriny dia tsy mila manasongadina ny natiora marika, fa mila mijery tsara ny endrika sary. Ny fampiasana ny motera Krismasy dia mahatonga ny boaty hahita aina.
Ny famolavolana loko dia mitana toerana lehibe amin'ny famolavolana fonosana. Ny loko dia zava-dehibe amin'ny fanatsarana sy fanasongadinana ireo vokatra. Ny fampiasana loko fonosana dia ny sary famolavolana sary iray manontolo, mifangaro mifamatotra akaiky. Fepetra takiana amin'ny fahamendrehana, homogenisation, ity no lokon'ny sivana, manadio ny haavon'ny famintinana. Miorina amin'ny fiarahan'ny olona sy ny fomban-doko izany, ny fihoaram-pefy ary ny loko dia fitaovana fandefasana zavakanto. Mandritra izany fotoana izany, ny lokon'ny fonosana dia tsy maintsy voafetra ihany koa amin'ny alàlan'ny fizotrany, ny fitaovana, ny fampiasana ary ny faritra fivarotana.
Teo aloha: Kitapo vita amin'ny voninkazo azo zakaina azo zakaina ho an'ny sipa
Manaraka: Namboarina ho boribory fanomezana boaty misy boaty napetraka avo lenta
Boaty fitehirizana taratasy na birao an-trano misy cap lehibe ...